Girlsmụ agbọghọ Na Tbọchị ICT: Womenmụ nwanyị Africa 4 nwere Mmetụta Na ICT Na-akwalite Nsonye malemụ nwanyị
Ebe E Si Nweta: Carricom
Ihe onyonyo nke komputa komputa bu ihe nzuzu nke nwa agbogho, nke n’amaghi ama banyere gburugburu ya. Ma ọ dịkarịa ala, nke ahụ bụ onyinyo nke ọdịbendị na-ewu ewu gosipụtara ọtụtụ iri afọ. N’ụzọ dị mwute, ụdị echiche a na-eme ka echiche nwoke na nwoke dabara adaba na teknụzụ karịa ụmụ nwanyị ibe ha.
Taa, akụkọ agbanweela nke ukwuu na ụmụ nwanyị, n'agbanyeghị afọ ole ha dị, ọdịbendị ha, okpukpe ha, na agbụrụ ha, abụghị naanị ịkọwapụta teknụzụ kamakwa na-akpali ndị na-eto eto ịtụle ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Otu ebumnuche nke ncheta afọ a nke Girlsmụ nwanyị International na ụbọchị ICT bụ ime ka a mata ụmụ nwanyị ndị nlereanya na onyinye ha na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ.
A na-eme Girlsmụ nwanyị International na ICT Day kwa afọ na Tọzdee nke anọ n'April iji mee ka ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ nwee ohere nha na sayensị, teknụzụ, injinia na mgbakọ na mwepụ. Na emume nke mmemme nke afọ a, anyị na-egosi ụmụnwanyị Africa anọ nwere mmetụta na ICT bụ ndị na-akwado itinyekwu ụmụ nwanyị na ICT dịka ụzọ isi mechie nkewa dijitalụ nkewa na Africa.
Ada Nduka Oyom - Nigeria
Ada bụ Onye malitere Ọ na Koodu Africa (SCA), otu ulo oru na-abughi uru na-elekwasị anya n'ememe na ịkwadebe ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị Africa nke nwere nkà na ụzụ. Kemgbe ọ malitere SCA na 2016, ọ metụtara ụmụ nwanyị 6,000 nọ n'akụkụ mba 15 Africa ọ bụla ma na-akwado ụdị okike dị iche iche na teknụzụ n'otu oge.
Ihe na-akpali ya bụ ọchịchọ nke ịhụ nnochite anya ụmụ nwanyị nha anya na ọrụ niile na ọkwa na teknụzụ na ịkụziri ọgbọ ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị na-esote ike iji nwee ike imebi ihe mgbochi n'ime ngalaba teknụzụ na STEM n'ozuzu ya.
Site na ogo mmụta na Microbiology, ọ bụ ihe akaebe na nwanyị nwere ikike ịhọrọ ụzọ nke ya na ndụ. Ọ malitere dị ka onye nkuzi na-akụzi ihe nke onwe ya n'oge ụbọchị mahadum ya, ọ na-arụ ọrụ ugbu a na Google dị ka onye njikwa obodo ya nke Eshia na mpaghara Sahara Africa ma na-ekwukwa ọdịiche dị iche iche na ntinye dị ka ndị inyom Techmakers (WTM) gafee isi dị iche iche n'ime Sub Sahara Africa.
Baratang Miya - South Africa
Baratang bụ onye guzobere na CEO nke GirlHype - Women Who Code, otu na-enweghị uru na-enye mmemme na nkuzi mmepe ngwa maka ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ.
Site na GirlHype, Baratang gbadoro ụkwụ n ’ihụ na ọgbọ nke ụmụagbọghọ nke South Africa nwere ohere kacha mma iji nweta ikike ha zuru oke ma na-ekwukwa okwu banyere inweta enweghị ohere maka ụmụ agbọghọ nọ n’ụlọ ya.
Onye isi ndu nke ụmụ klọb Mozilla maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị, ọ kwenyere na ngwa ngwa ngwa ngwa ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ dijitalụ ma ọ bụrụ na ha nwere ịntanetị, ọ ga-eme ka ha nwekwuo ike na akụ na ụba na nnwere onwe.
Kemgbe afọ 2015, ọ bụbu onye otu TechWomen, otu ụzọ Ngalaba Na-ahụ Maka Mmụta na Omenala nke Ngalaba Ọchịchị US. N’afọ 2016, ọ bụ onye nke izizi nke MTN Women In ICT Community Builder Award.
Judith bụ ngalaba-nchoputa na president nke AkiraChix, ulo oru ndi mmadu metutara ndu ndi nwanyi no na East Africa site na nkuzi, ntuziaka, na mmemme umuaka umuaka umuaka.
Ya na ndị enyi ya, ọ malitere AkiraChix na nzaghachi maka nsogbu na ajọ mbunobi ha nwetara dị ka ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ na mpaghara teknụzụ n'Africa. Yabụ, AkiraChix ghọrọ oghere ebe ụmụ nwanyị ga-anọkọta ọnụ ma mụta ihe n’aka ibe ha.
N'ikwekọ na ọhụụ Judith iji nyere ụmụ nwanyị ike na teknụzụ na ego iji nyere ha aka iduzi obodo ha, AkiraChix na-enyere aka ịzụlite ọgbọ nke ụmụ nwanyị ndị na-enyere teknụzụ aka iwulite azịza ọhụụ na-ekwu banyere nsogbu Africa.
A mara Judith maka ọrụ ya, ihe dị mkpa n'ime ha bụ onyinye Anita Borg Change Agent na 2012, na ụmụ nwanyị iri anọ n'okpuru 40 onyinye maka ụmụ nwanyị ndị nwere mmetụta dị ukwuu na Kenya, akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe.
Na 2015, ọ bụ onye na-ekwu okwu na Celebration Celebration Celebration of Women in Computing to the Global Entrepreneurship Summit ebe ya na Barack Obama, Onye bụbu Onye isi ala US, na Onye isi ala Uhuru Kenyatta nke Kenya kesara ebe a.
Pọcho bụ onye isi ala na onye guzobere MUSODEV (Association maka Nkwalite Womenmụ nwanyị site na ICT).
Dịka onye injinia kọmpụta, a kpaliri ya ịkọwapụta ịkọwapụta ụmụ nwanyị na usoro ọrụ ya. Na mbu, o kere MUSODEV dika uzo eji eme ka umuaka ndi a puru ighota na uzo. Agbanyeghị, ọ gbasaa ụzọ na mkpakọrịta nke na-enyere ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ aka ịrụ ọrụ na ICT.
Porcho bụ ọkà okwu na mbipụta mbụ nke Abidjan Women In Tech ebe ọ na-edozi isiokwu nke imebi ihe mgbochi nke koodu ahụ ma bụrụ koodu ahụ. Na mpaghara ya, ọ na - eduzi nzukọ na ihe omume metụtara kọmputa na ikike ụmụ nwanyị na teknụzụ. O butere mbido KIDS LAB na mmemme kọmputa na robotik na Bamako.
5 Womenmụ nwanyị Africa na-ejegharị ejegharị bụ ndị jụrụ ịbụ ndị a kpọrọ aha n'ụgbọala